Tranga manantantara iray any Però. Nanohana ny asakaroka tamin’ny fiteny quechua izy. · Global Voices teny Malagasy
Ary nahazo ny naoty ambony indrindra izy
Voadika ny 04 Novambra 2019 14:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, русский, українська, Español
Tamin'ny talata 15 oktobra 2019, nahazo ny mari-pahaizana dôktôrà amin'ny literatiora peroviana sy latinô-amerikana tao amin'ny Oniversitem-Pirenena Voalohany tao San Marcos de Lima (UNMSM) i Roxana Quispe Collante. Nahazo naoty 20, ny isa tsara indrindra amin'ny rafi-pampianarana peroviana ny asakaroka notohanany. Fa ny tena nampiavaka ity asakaroka ity, dia ny nanohanana azy manontolo tamin'ny fiteny quechua [fr].
Ao anatin'ny fianakaviam-piteny vazimba avy ao Andes afovoany, izay mivelatra amin'ny faritra andrefana manontolo ao Amerika atsimo sy manavatsava firenena fito ny quechua. Araka ny lahatahiry avy ao amin'ny Ivontoeram-pirenena amin'ny ara-antontanisa sy ara-kajimirindra [fr], olona latsaky ny efatra tapitrisa, 19.9% amin'ny mponina, no niteny quechua tamin'ny taona 2018 tao Però.
Nefa sambany no nisy asakaroka notohanana tamin'ity fiteny ity. Jereo amin'ity lahatsary manaraka ity ny fanohanana asakaroka iray manontolo amin'izany:
Lazain'ny tranonkalan'ny oniversite ho lanonana manatantara ity fotoana ity ary nomeny ny torohay sasantsasany amin'ny asakarok'i Roxana Quispe:
Kihondalana manatantara ho an'ny fiteny quechua. Sambany teto Però, natolotr'i Roxana Quispe Collante amin'ny fiteny quechua ny asakaroka hahazoana dôktôrà amin'ny literatiora peroviana sy latinô-amerikanina ao amin'ny Oniversitem-pirenena voalohany ao San Marcos (UNMSM), ary nahazo ny naoty ambony indrindra amin'ny isa 20 (excellent), lanonana manana ny lanjany lehibe amin'ny fitakiana [ara-drariny] (hitenenana) ireo fitenin-janatany eto amin'ny firenena. Ny fanadihadiana, mitondra ny lohateny hoe “Yawar Para, Kilku Warak’aq, Andrés Alencastre Gutiérrezpa harawin pachapi, Qosqomanta runasimipi harawi t’ikrachisqa, ch’ullanchasqa kayninpi” (“ny ranomaso rà, fiovana endrika sy fiavahana manokana ao amin'ny tontolo poetika quechua yaraví [fr] avy amin'i Andrés Alencastre Gutiérrez,[poeta iray avy ao Cuzco nanoratra tamin'ny anarana Kilku Warak'aq]”, dia tsy natao fotsiny ihany ho vavolombelon'ny lanja litereran'ny poeta sy ny fijerena indray ny dikan'ny voasoratra ao amin'ny angon-tononkalo Yawar Para, fa natao koa hanabe voho indray ny quechua ka hahatonga azy ho matanjaka kokoa eo anatrehan'ny hevi-draikitra ara-piteny sy ara-kolontsaina.
Avy ao Cuzco [fr] ity dokotera vaovao antsoina hoe Quispe Collantes ity, profesora ao amin'ny oniversite ary manana maîtrise amin'ny haifiteny ao amin'ny Oniversiten'ny Papa katolika ao Però. Manome torohay tamin'ny lalana nandalovany tao amin'ny oniversite sy tamin'ny tontolon'ny asa ny bilaogy K@wsay :
Miteny sy manoratra amin'ny fiteny quecha sy anglisy [i Roxana Quispe]. Liana ihany koa amin'ny famakafakana sy fikarohana literatiora, haifiteny, fanabeazana iraisankolontsaina sy roa fiteny, anthropolojia, ny zavakanto sy ireo fihetsiketsehana amin'ny fimaroana sy ny vakoka amin'ny kolontsaina quechua. Nandritra ny fanolorana nataony i Quispe Collantes niaiky fa tsy maintsy […] “nandeha hatrany amin'ny faritanin'i anas [atsimon'i Cuzco] hanamarina ny dikanteny sy ny hevitry ny anarantsamirery izay tsy hitako any an-kafa. Nanontany ny ray aman-dreniko aho, ny raibeko sy ny renibeko, ny mpampianatra ahy fa tsy hain-dry zareo”.
Ireo mpitsara dia ahitana ireto dokotera manaraka ireto: Isabel Gálvez, mpampianatra tompotoerana amin'ny fampianarana Quechua ao amin'ny UNMSM, Gonzalo Espino, sojabe-lefitra amin'ny fikarohana, fianarana (literatiora) ary talen'ny asakaroka, sy ny profesora Mauro Mamani, Rómulo Monte Alto ary Dorian Espezúa.
Tamin'ny famaranana ny fanolorana nataony i Roxana Quispe naneho ny hafaliany, izay nampitain'ny fampitam-baovao mahazatra sy antserasera ao Però :
Mihetsi-po tanteraka aho misolotena ny vehivavy miteny quechua sy afa-mirehareha amin'ny kolontsainy. Maniry ny Runa Simi [fitenin'olombelona : ny quechua] aho mba tsy ho eo anivon'ny vondrom-piarahamonina ihany no itenenana azy fa aty amin'ny oniversite ihany koa.
Niampitampita imbetsaka tao amin'ny famoaham-baovao iraisampirenena izany vaovao izany, toy ny El País ao Espaina sy ny The Guardian ao Angletera. Etsy ankilan'izany, nifaneho hevitra tamin'ity lohahevitra ity ihany koa ny mpisera Twitter :
Tao anatin'ny 468 taona izao, tsy nisy olona nanoratra ny asakaroka hahazoana dôktôrà amin'ny fitenin-janatany ato amin'ny firenentsika. Nanao izany i Roxana Quispe tamin'ity taona ity. Ary maniry izy hanohy hampiroborobo ny quechua ao amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo.
this is hugely important
many thanks to roxana quispe collantes for being the first to write and defend her doctoral thesis in quechua
Student in Peru makes history by writing thesis in the Incas’ language https://t.co/PBYqiPE02V
Tena zava-dehibe tokoa ity..
Mankasitraka indrindra an'i Roxana Quispe Collantes noho izy voalohany nanoratra sy nanohana asa-karoka amin'ny fiteny quechua.
Miditra ao anatin'ny tantara noho ny fanoratany ny asakaroka ho amin'ny fitenin'ny incas ny vehivavy mpianatra iray ao Però.